Hay’adaha amniga oo ka been sheegay weerarkii Xalane | KEYDMEDIA ENGLISH
Hay’adaha amniga oo ka been sheegay weerarkii Xalane
Si guud, sir-soonka aan xiganeyno, waxa ay hoosta ka xariiqeen inuu meeshii ugu xooganaa marayo, isku milanka Al-Shabaab iyo hay’adaha Amniga, lana la qorsheeyay khaarijinta siyaasiyiin ay ka mid yihiin musharixiin Madaxweyne iyo xldhibaanno mucaara ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hay’adaha Amniga ee Dowladda Federaaka, ayaa wali wada baal-maridda xaqiiqooyinka amni ee dalka, gaar ahaa qaraxyada iyo dilalka siyaasadeed iyo argagaxiso ee joogtada ka noqday Caasimadda waddanka ee Muqdisho.
Sida ay Keydmedia Online, ka soo xiganeyso ilo sir-doon oo la isku halleyn karo, laamaha amaanku, waxa ay si ku tala-gal ah uga beensheegeen, weerarkii siyaasadeed ee 23 March 2022, lagu qaaday xeyndaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle.
Sida ay sheegeen Saraakiisha Booliska, labo dagaallame oo ka tirsan Al-Shabaab, ayaa in ka badan labo saac ka dagaallamayay teendhooyinka iyo kunteenarrada dhanka bari ka xiga garoonka, halkaasoo ay ku dileen lix ruux oo midkood Soomaali yahay.
Hayeeshee, xaqiiqqda rasimaga ah ayaa middaas ka gaddisan, xogaha sir-doon oo ay heshay KON, ayaa sheegaya in kooxda duullanka ku qaadday aagga aadka loo ilaaliyo ee Xalane, ay ka koobnaayeen afar dagaallame oo dharka ciidanka NISA xirnaa.
Afarta ruux, waxa ay dhamaantood hore uga soo goosteen Al-Shabaab, labo ka mid ah, waxa ay DF isku soo dhiibeen, ka hor doorashadii Farmaajo, [dabayaaqadii 2016], halka labada kale, xilliyo kala duwan yimaadeen sanadkii la soo dhaafay ee 2021.
Labada hore, ugu yaraan saddex sano ka hor ayaa laga saaray Xero Sarandi oo ah xarun lagu dhaqan celiyo, dhallinyarada ka soo goosata Al-Shabaab, waxaana lagu daray shaqsiyaad, “Been ma sheegayaal” loo yaqaan oo NISA, u qaabilsan masabidashada.
Kadib, waxaa lagu daray askarta dhar-cadda ah ee NISA, u qaabilsan garoonka, ka hor inta aan saddex todobaad ka hor la geyn qeybta Marina Gate iyaga oo ilaalo ah, xogtu waxa ay muujineysaa in labada dagaallame isku shaqo ahaayeen mudo saddex sano ah.
Subixii weerarka, labadaan nin, waxa ay toogteen, mid ka mid ah askarta AMISOM oo ilaalada kula qornaa iyo hal ruux oo Soomaali ah, waxayna si weyn u caawiyeen, labada kale, oo iyaguna toogtay afar ruux oo ajaanib ah, oo tababarayaal ciidan ahaa.
Labada danbe, oo dhanka Al-Shabaab ka yimid hal sano ka hor, waxa ay dhankooda, soo mareen Xero Sarandi, halkaas oo NISA, ka soo saartay, bishii October 2021, waxayna qaateen tababar la xariira toogashada iyo ku dagaallanka bastooladda iyo bumbada.
Dagaallamayaashaan, waxaa xeyndaabka garoonka la geeyay maalin ka hore weerarka, hayeeshee, waxay subixii weerarka iyagoo ood-taraar ka ka yimaadeen dhanka waddada Isbitaalka Yerdemeli, waxayna si fudud u galeen albaabka xerada.
Ciidanka Haramcad, ayaa toogtay labadaan nin, sida ay sheegeen saraakiisha Booliska, hayeeshee, lama soo hadal qaadin labada kale, oo masuul ka ahaa daminta kaamirooyinka ilaalada iyo toogashada Askari iyo qof qandaraasle ah.
Xogtaan oo KON, ka heshey, ilo loo loo qaateen, waxa ay intaas, ku dareysaa in weerarku ahaa mid siyaasadeed oo hoggaanka NISA iyo Al-Shabaab isla-fuleyen, isla-markaana uu jiray heshiis la xariiray qarixii Baladweyne ee lagu dilay AUN Xildhibaan Aanimo.
Xogto, waxa ay sidoo kale, ka sii hadashay, safarkii uu Fahad Yaasiin ku tagay Baladweyne 18 Feb 2022 iyo qarixii lagu hoobtay ee maalin ka dib ka dhacay magaalada, kaasoo ay xogtu ku macneysay mid lagu khalqal galinayay shacabka oo Fahad ka soo horjeeda.
Sidoo kale, xogtu, waxa ay farta ku fiiqday qarixii isla-maalintaas ka dhacay Boosaaso, oo shacab odayaal dhaqan u badan lagu xasuuqay, xilligaas, waxaa Boosaaso ku suganaa shan wasiir oo Farmaajo iyo Fahad u shaqeeya, kuwaas oo kuraas ka waayay Puntland.
Si guud, sir-soonka aan xiganeyno, waxa ay hoosta ka xariiqeen inuu meeshii ugu xooganaa marayo, isku milanka Al-Shabaab iyo hay’adaha Amniga, lana qorsheeyay khaarijinta siyaasiyiin ay ka mid yihiin musharixiin Madaxweyne iyo xldhibaanno mucaarad ah.